Laba injineer oo hore u ahaa Mercedes ayaa ku biiray Apple | Waxaan ka imid mac
Laba injineer oo hore u ahaa Mercedes ayaa ku biiray Apple
Baabuurka korontada iskiis u wada? Nidaam wadis baabuur oo madaxbannaan si loogu iibiyo soo -saarayaasha kale? Waqtigan xaadirka ah, waxay umuuqataa sidaas waxa kaliya ee la xaqiijiyay waa in Apple ay ka shaqeyneyso mashruuc la xiriira warshadaha baabuurta.
Wararkii ugu dambeeyay oo kaliya xaqiijinaya shaqaalaysiinta laba injineer oo hore ka yimid soo saaraha Jarmalka Mercedes sida ay sheegaan wiilasha MacRumors.
Saxiixyadan waxaa lagu daray kuwii dhowr bilood ka hor markii uu saxiixay mid ka mid ah maamulayaasha sare del horumarinta baabuurka korontada ee BMW Gudaha i, dhaqdhaqaaqyo kaliya oo xaqiijinaya Mashruuca Titan ayaa wali socda, inkasta oo aan sidii markii hore loo qorsheyn
Labadan injineer ayaa sii waday ku biir shaqaalaha Kooxda Mashaariicda Gaarka ah. Iyadoo la tixgelinayo shaqooyinkoodii hore, wax macquul ah ayaa ah in loo maleeyo inay ku biireen horumarinta Apple Car, oo ah Baabuur Apple ah oo sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay ay bilaabi karaan soosaarid taxane marka la gaaro 2024
Koontada LinkedIn ee mid ka mid ah shaqaalahan, Dr. Anton Uselman, waxaa laga akhrisan karaa inuu ka shaqeynayay Mercedes ilaa Ogosto isagoo ahaa injineer horumarineed oo ku aaddan hababka baabuur -wadidda ee shirkadda oo uu horay uga shaqayn jiray Porsche. At tufaax wuxuu hayaa booska Injineerka Naqshadeynta Alaabta. Marka laga hadlayo injineerka labaad, oo aynaan magaciisa garanayn, wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay sidii injineer shirkadda Jarmalka ee Mercedes.
In kasta oo Apple ay lacag badan gelisay si ay u fuliso mashruucan, waxay u badan tahay inay u jeesan doonto dhinac saddexaad, soo saaraha gawaarida la aasaasay, si ay awood ugu yeeshaan toosin bilowga iyo soo saarista gaadhigaaga.
Bilowgii sanadka waxaa la isla dhex marayay in Apple waxaa lagala xaajooday Hyundai si looga faa'iidaysto saldhig cusub (chassis, motor iyo baytariyada) oo ay isticmaali doonaan baabuurta xiga ee Huawei, laakiin waxay u muuqataa in wax waliba waxba noqdeen. Wararkii ugu dambeeyay ee arrintan la xiriira waxay tilmaamayaan Toyota.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Laba injineer oo hore u ahaa Mercedes ayaa ku biiray Apple
Xilliga labaad ee Little America waxaa la toogan doonaa 2022